Rue tii: ndeyei? Kugadzira? Kuenda kumwedzi kunobatsira here?
utano	 29 December 2018
Rue anoenda pamusoro pemushonga wekurapa, chirimwa chisinganzwisisike, chinoshandiswa zvakanyanya kugadzirisa nharaunda, kubvisa shanje, ziso rakaipa uye mamwe mamiriro asingafadzi ayo vanhu vese vanopinda nawo muhupenyu. Naizvozvo, tii yerue inogara ichigamuchirwa, chero chiitiko.
Mune inotevera misoro iwe unodzidza maitiro ekugadzira rue tii, pamwe nezvimwe zvinongedzo zvinogona kuwedzerwa kune yako tii. Buda!
Nzira yekugadzira rue chai?
Nzira yakanaka yekugadzira rue tii ndeyekutenga shizha nyowani kuchitoro chemishonga yemakwenzi, asi kana wakanamatira, tenga iyo yakaoma. Iyo majagi ane maindasitiri anogona kunge asiri kushanda.
Tora boka retsva kana rakaomeswa rue uidururire mukati litre yemvura irikufashaira. Bvisa moto, vhara pani nemvura uye rue uye uende kwemaminitsi makumi matatu. Dzvanya iyo tii uye unwe makapu matatu kusvika mana pazuva pasina kutapira.
Kugadzirira sei nekudonhedza?
Rue tii inonaka, inotorwa yakatonhora, saka inonaka kwazvo uye inoshanda seyakanaka mishonga. Asi iwe unogona zvakare kuda kunwa iyi tii kune zvinangwa zvisiri zvehutano chete. Naizvozvo, musanganiswa wakanaka kwazvo ndiyo tii yerue necachaça.
Cachaça inhaka yeBrazil isiri yemuviri uye kana ikatorwa muhuwandu chaihwo uye mune shoma shoma, inokuunzira mufaro uye haizokuvadze. Dambudziko necachaça rechiropa kuwedzeredza uye izvi zvinofanirwa kudzivirirwa zvakadaro.
Ndosaka kuisa kapu yekachaça mune yako rue tii kuchaita kuti ive inonaka kwazvo, yakanaka kuti iwe unakirwe kwekanguva, teerera kumimhanzi, idya nemakeke, zvakadaro, izvo zvauri kuzoita sarudzo yako.
Rue tiyi nesinamoni yakanaka kune chii?
Kana chinangwa chako chiri chekunwa rue tiyi nenzira ine hutano, zano rakakura ndere kuwedzera zvishoma sinamoni tii. Usapfuure pamusoro pazvo, pini chete yakanaka pamukombe. Iyo inonaka kwazvo, kune avo vanofarira sinamoni, pamusoro pekuva ne antioxidant, anti-inflammatory uye yakanaka kune muviri wako wese.
Zvakanakisisa kutenga rue nyowani, saka tsvaga mishonga yemakwenzi zvitoro kana kunyange zvitoro zvemaruva zvine rue mudhodzi iwe wekudyara uye wozokohwa mashizha kuita tii uye kushandisa mukuchenesa pamweya kwenzvimbo yako yemumba.
Kana iwe usiri kuiwana, muzvitoro zvechisikigo zvekudya iwe unogona kutenga yakaomeswa rue, inotengeswa muhombodo kana muhari kuti ishandiswe muiyi. Usambofa wakatenga iyo pack yeakagadzirira-yakagadzirwa tii. Iyo yakazara maindasitiri, izere nemakemikari zvigadzirwa izvo zvinoita kuti iwe urasikirwe neese kukosha kweiyo rue kana chero imwe miriwo yaunotenga.
Rue tii inobatsira kudzikisa kuenda kumwedzi here?
Rue mushonga unobatsira mukadzi kuenda kumwedzi. Haisi iyo tii ichagadzira iyo kuenda kumwedzi dzika pasi, asi zvinoita kuti mvura iwedzere kuyerera, izvo zvinoita kuti kubviswa uku. Uyezve, zvakare yakakosha pakudzivirira marambi uye zvimwe zviratidzo zvemuviri zvePMS.
Rue tii inobatsira muviri wese. Inoshanda yakananga pane weti, kuenda kumwedzi, kufema uye kugaya masisitimu, ichiita kuti zvese zvishande pamwe nekukwanisika, pamwe nekuve unonyaradza marwadzo.
Rue tii uyemutete?
Chinhu chakanakira rue ndechekuti ine diuretic simba, ndiko kuti, inobvisa mvura kuburikidza neweti. Kubviswa kwemvura uku kunobatsira munhu kuti agare, kubvisa munyu, mafuta, zvese kuburikidza neweti uye ichi chikamu chemaitiro e kuonda.
Vazhinji vanhu vanofunga kuti vanoda kudzikira mapaundi chaizvo vanoda kurasikirwa nemunyu, shuga, mafuta, zvese kuburikidza neweti. Kuti uite izvi, ingonwa mvura yakawanda zuva rega rega, dzivisa chikafu chine yakawanda sodium uye glucose uye unwe rue rezuva nezuva.
Mukuwedzera kune zvakanakira vakadzi mumwedzi uye nekubvisa sodium uye shuga mumuti weti, rue tii inewo basa rinopesana nekuzvimba, rinobatsira mukusagadzikana kweuori, rakanakira asthma, inorapa marwadzo erheumatic uye rinotobatsira nekushanda kwakakodzera kwegadziriro yekugaya.
Kana iwe waifarira chinyorwa ichi nezve Rue tii, igovane pane ako masocial network uye mameseji maapplication!
Almond mafuta: Kunyorovesa bvudzi rako!
Deredza uremu usina mushonga: Matipi ekuzadzisa huremu hwaunoda!
Slimming Hibiscus: Iwe wakaonda uye unodisa mumavhiki mashoma!